रबीले थर्काएका मन्त्रीले भने,”मन्त्रीलाई लखेटेँ, भगाएँ भन्ने आशयले ब’दनाम गर्न खोजियो।” (भिडियो सहित) – Purba Aawaj
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०१, २०७८ समय: ११:५४:०२
तपाईंले के गर्नुभयो भन्दै रबीमाथी जंगिएका मन्त्री रामवीर मानन्धरलाई रबीले मन्त्रीप्रती आ’क्रो’शित हुँदै भने,”मैले १०३ ओटा सिलिन्डर ल्याएँ तपाईंले एउटा पनि सिलिन्डर ल्याउनुभयो ? एउटा सिलिन्डर ल्याएर दिनु छैन झण्डा हल्लाएर हिंड्ने” भन्दै मन्त्रीकै अगाडि थ’र्का’एका थिए रबी लामिछानेले।
शहरी विकास मन्त्री रामवीर मानन्धर र रबी लामीछानेबीचको भिडियो सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल भएको थियो।मन्त्रीलाई सडकमै गा’ली गर्दै रबीले एउटा सिलिन्डर दिन सक्नुछैन,त्यत्तिकै झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने भनेर रबीले मन्त्रीको सा’तो लिएका थिए।त्यसपछि कुनैपनी प्रतिक्रिया नदिइकन हिँडेका मन्त्री मानन्धर यतिबेला पुन मिडियामा आएका छन् र आफ्नो स्पष्टीकरण दिँदै अन्नपूर्ण सँग गरेको कुराकानीमा उहाँले बोलेको तल साभार गरिएको छ।
मन्त्रीलाई ल’खटेँ,भ’गाएँ भन्ने आश’यले मेरो क्रियाकलाप हेर्नुहोला,मैले के गरेको थिएँ र ? उहाँले मागेको एउटा सिलिन्डर हैन ? सुन्नुहोला,हेर्नुहोला तपाईंले।उहाँले एउटा सिलिन्डर त दिएन भन्दै दोहोर्‍याइ,तेहेर्‍याई भन्नुभयो।मन्त्रीलाई भगाएँ,ल’खटेँ,भन्ने उहाँहरूको आ’शयसँग जोडिएको छ।उहाँलाई आवश्यकता थियो त ? १०३ ओटा चाहिँ ल्याएँ भन्नुभयो हिन त ? तर कहाँबाट ल्याउनुभयो,कसरी ल्याउनुभयो भन्नुभयो त ?
एउटा सिलिन्डर मलाई दिनुहोस् भन्नुको आशय के हो ? लखट्नलाई पनि क्षमता चाहिन्छ,मैले चाहिँ त्यहाँ के गरेको थिएँ र ? मलाई उडा’इदिएको,अपमान गरेको र कुटेको भरमा समाधान हुन्छ भने फेरि म अ’प’मा’नित हुन चाहान्छु।केही फरक पर्दैन मलाई।
कुनै पत्रकारलाई यो को’रो’ना महा’मा’रीको समयमा मलाई बदनाम गरेर हाइट बढाउन खोजेको हो भने गरोस् मलाई केही फरक पर्दैन। मेरो नाममा जोडेर कसैले केही आर्जन गर्छ भने गरोस् केही फरक पर्दैन।त्यतिबेला म ग्यास कसरी भरिन्छ भनेर हेर्न गएको थिएँ। म चाहिँ सुरुमा रबी लामीछानेसँगै कुरा गर्दै गएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ खिचिएन।एक्कासि उहाँले र उहाँको पि’ए हो कि को हो,उहाँले पनि थर्काउनुभयो।मैले किन उहाँहरू प्रती वि’वाद गर्नुपर्‍यो। म एउटा राज्यको मिनिस्टरले यो भन्दा संयंता अपनाउनु पर्ने ठाउँ छैन।
के एउटा मन्त्रीलाई यसरी गा’ली गरेर,लख’टेर को’भिड ठीक हुन्छ त ? के तपाईंलाई आफ्नो कर्तव्य थाहा छैन ? पहिला चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्दैन ? गलत म्यासेज पुर्‍याउने मान्छेको हैसियत पनि हेरिन्छ।हामीले कान समात्ने बानी गरौं कागको पछि नलागौँ भन्दै प्रष्टीकरण दिएका छन्।
सिलिन्डर लिन आउने मान्छे केही पनि थिएन,मलाई एक्लै पारेर गा’ली गरियो। कृपया यस विषयमा तयार पारिएको मन्त्रीसँगको कुराकानीलाई अन्त्यसम्म हेर्नको लागि भिडियो यहाँ प्रश्तुत गरिएको छ हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला।धन्यवाद!
Last Updated on: May 15th, 2021 at 11:54 am